Voatsikera noho ny “fitavozavozana” sy ny ‘fanohanana an’i Shina’ ireo tompon’andraikitry ny OMS raha miparitaka manerana izao tontolo izao ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2020 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Nederlands, Español, Français, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny tatitry ny Fikambanana Manerantany momba ny Fahasalamana tamin'ny 29 febroary 2020 mikasika ny valan'aretina COVID-19.
Hatramin'ny nisian'ny valan'aretina vaovao coronavirus (COVID-19) tany Shina, dia tsy nitsahatra nidera an'i Shina ireo tompon'andraikitry ny Fikambanana Iraisampirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) noho ny ezaky ny firenena mba tsy hiparitahan'ny aretina. Saingy satria niparitaka nanerana ny firenena 53 io valan'aretina io izay nahitana tranga voamarina 6000 mahery ary nahafatesana olona 86 (tany ivelan'i Shina) tamin'ny 29 febroary 2019, dia nanome tsiny ny Tale-Jeneraly ny OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus ny mpiserasera noho ny valinteniny manohana ani Shina tamin'ny dingana voalohany nisian'ny valan'aretina.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, saika efa ho olona antsasaky ny tapitrisa no nanasonia fanangonan-tsonia antserasera mitaky ny fialany.
Midera an'i Shina
Satria niakatra avo folo heny ny isan'ireo tranga voamarina tamin'ny COVID-19, raha 45 tamin'ny 17 Janoary ary niakatra efa ho 500 mahery tamin'ny 23 Janoary, dia nanambara ny fanakatonana an'i Wuhan i Shina. Tamin'izany fotoana izany, dia maro ireo manampahaizana ara-pahasalamana nanao fanairana ny amin'ny mety hisian'ny valan'aretina manerantany saingy nisara-kevitra manoloana ny olana ireo komitin'ny vonjitaitra ao amin'ny OMS. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nanambara i Tedros fa tsy ilaina ny manambara ny fisian'ny vonjitaitra momba ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena (PHEIC amin'ny teny Anglisy).
Tamin'ny 28 Janoary, nitsidika an'i Shina i Tedros ary nihaona tamin'ny filoha shinoa Xi Jinping. Taorian'ny diany, dia nidera an'i Shina izy noho ny «ezaka nataony amin'ny mangarahara». Mifanohitra tanteraka amin'ny tatitra nataon'ireo ny mpandinika ny zon'olombelona izany izay niampanga an'i Shina noho ny fepetran-tsivana napetrany izay nanakana ny fivezivezen'ny vaovao momba ny valan'aretina. Tamin'ny 21 febroary, mpiserasera 416 no voasazy noho ny “fanaparitahana tsaho” momba ny coronavirus.
Nahemotr'i Tedros hatramin'ny 30 Janoary ny fanambaran'ny PHEIC, saingy nanamafy izy fa tsy ilaina ny “mitsabaka tsy amin'ny antony amin'ny dia sy ny varotra iraisam-pirenena“.
Andro vitsy lasa izay tamin'ny 26 Janoary, nanaiky ny ben'ny tanànan'i Wuhan fa maherin'ny dimy tapitrisa ny mponina tao Wuhan no nandao ny tanàna talohan'ny nanakatonana azy. Nisy ny tahotra fa nitondra tsimokaretina nanerana ny firenena ireo izay nandao ny tanàna. Tao anatin'ny herinandro latsaka, nahatratra efa ho 10.000 ny isan'ireo tranga voamarina tany Shina. Satria nihamaro ireo tanàna nanambara fepetra henjana mba hifehezana ny otrikaretina, dia nandao an'i Shina mba haka vakansy maharitra ireo izay afaka nanao an'izany.
Na dia nampanantena an'i Tedros aza i Xi fa handray tsara izay fanadihadiana ataon'ny ekipa manam-pahaizana manerantany izay misy mpikambana 10-15 i Shina mba hanampy amin'ny fandalinana ny fiavian'ny viriosy, dia nahemotra izany fa nanokatra ny varavarany ho an'ny “ekipa manam-pahaizana ambony” ahitana tompon'andraikitra telo ao amin'ny OMS ihany i Shina. Nanaparitaka ny “sombim-peon'i” Bruce Aylward, manam-pahaizana ambony tao amin'ny OMS izay nidera an'i Shina tamin'ny fanambarana toy ny hoe “ho an'ny vahoakan'i Wuhan, ekena fa manana trosa aminareo izao tontolo izao” ary “raha tratran'ny COVID-19 aho, dia te-hotsaboina any Shina” ireo fampahalalam-baovaom-panjakana sy ny sehatra media sosialy Shinoa toa ny Weibo sy ny Tiktok.
Nanamafy i Aylward fa hita fa nahomby tamin'ny fanakanana ny valan'aretina ny paikady tamin'ny fepetra haingana noraisin'i Shina. Nandritra izany fotoana izany, dia nanakiana ny firenena hafa noho ny tsy fandraisana fepetra tahaka izany izy. Niaiky i Aylward taty aoriana nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa tsy natokana tamin'ny faritra manokana izy taorian'ny diany Shina satria tsy nitsidika “faritra maloto” tany Wuhan.
Tamin'ny 25 febroary, iray andro taorian'ny fahavitan'ny «ekipa manam-pahaizana ambony» ny iraka nataony tany Shina, dia sambany nihoatra ny isa tao Shina ny isa fitambaran'ireo tranga voamarina fa voan'ny aretina ivelan'i Shina. Tamin'ny 27 Febroary, dia nahatratra 4.351 ireo tranga voamarina ary 67 no maty tany ivelan'i Shina manerana ny firenena 48. Tany Korea Atsimo dia nihoatra ny 3.000 ny isan'ny tranga voamarina ary 17 no maty. Nitatitra kosa i Italia fa maherin'ny 1.000 ireo tranga COVID-19 ary 29 no maty. Nilaza ny loharanom-baovan'ny BBC fa 210 ireo namoy ny ainy noho ny COVID-19 tany Iran.
Misy ireo manontany hoe fa maninona no misalasala fatratra i Tedros hanambara ny valan'aretina ho pandemika (aretina mahatratra firenena maro).
“Valiny moramora sy malemy” avy amin'ny OMS
Tezitra amin'ny tsi-fihetsehan'ny OMS ny mpiserasera ary misy ny mamadika izany ho sary fanesoesoana tahaka ity iray ity:
Misy anganongano miteny fa rehefa mibitsibitsika “pandemika” in-telo eo anoloan'ny fitaratra ianao dia mipoitra i Tedros Adhanom.
Misy ireo miampanga an'i Tedros ho pro-Beijing:
Death toll goes up when trusting #China_is_terrorist. Death toll goes up when trusting WHO Director Tedros Adhanom Ghebreyesus. Do they collude? You say. pic.twitter.com/TseV3wq3Ae
Miakatra ny isan'ny maty rehefa matoky an'i (mpampihorohoro i Shina). Miakatra ny isan'ny maty rehefa matoky an'i Tedros Adhanom Ghebreyesus talen'i OMS. Miray tendro ve ireo? Miteny ianao.
WHO, please stop fake news about CCP China, you make the world drain into virus, It is highly recommend to dismiss Tedros Adhanom Ghebreyesus from Director General of WHO @realDonaldTrump @JustinTrudeau @VP @BorisJohnson pic.twitter.com/PWC7bhblsd
OMS ô, azafady re ajanony ny fandisoam-baovao momba an'i Shina Antoko komonista, ataonareo ho lasa viriosy izao tontolo izao, efa tena ilaina mihitsy ny hanesorana an'i Tedros Adhanom Ghebreyesus tsy ho tale jeneralin'ny OMS
Asongadin'ny hafa ny teny mifanohitra nataony:
Mieritreritra aho fa takatro amin'izay ny noresahan'i Tedros eo amin'ny resaka “varavarankelin'ny hirika”
Nasongadin'i Joshua Wong, mpikatroka ao Hong Kong, ny valiny moramora sy malemy avy amin'ny OMS tarihan'i Tedros
— Joshua Wong 黃之鋒 ? (@joshuawongcf) February 29, 2020
Tsy ny viriosy ihany no fahavalom-bahoaka voalohany, fa ny valiny malemy sy moramora an'ny Dr. Tedros, lehiben'ny OMS ihany koa.
Jereo ny fitantarana manokana an'i Global Voices miresaka ny fiantraika manerantany ny COVID-19.